Warshadda dhex -dhexaadka ah | Dhexdhexaadiyaha Shiinaha Organic Soo -saareyaasha, Alaab -qeybiyeyaasha - Qeybta 3
Sahayda warshadda Tetrabutylammonium fluoride trihydrate/TBAF CAS 87749-50-6
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate/TBAF
Xirxirida: 1kg/bac, 25kg/durbaan
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate/TBAF waa cusbada ammonium quaternary oo leh caanaha kiimikada₄N⁺F⁻. Waxaa ganacsi ahaan loo heli karaa sida trihydrate -ka adag ee cad iyo xalka tetrahydrofuran. TBAF waxaa loo isticmaalaa ilaha fluoride ee dareeraha dareeraha ah.
Tayo sare 99% Graphite fluoride/Fluorinated Graphite/Fluorographite CAS No 51311-17-2
Graphite fluoride/Fluorinated Graphite/Fluorographite
CAS No 51311-17-2
1,6-Dichlorohexane oo leh qiimaha ugu fiican CAS 2163-00-0
Magaca badeecadda: 1,6-Dichlorohexane
CAS No 2163-00-0
Caanaha molecular: C6H12Cl2
Miisaanka caanaha; 155.07
Xiriirka: Cathy Jin
Tel: +8618636121136 (Wechat/Whatsapp)
Sahayda warshadda Bakhaarka noolaha 2- [Tris (hydroxymethyl) methylamino] -1-ethanesulfonic acid/ TES CAS 7365-44-8
2- [Tris (hydroxymethyl) methylamino] -1-ethanesulfonic acid/ TES
Alaab-qeybiyaha Shiinaha dmc carbonate dimethyl 616-38-6
Magaca badeecada: DMC
CAS Maya .: 616-38-6
Daahirsanaanta: 99%, 99.5%, 99.7%
Waa mid ka mid ah dareeraha wax-ku-oolka sare leh iyo nooca ilaalinta deegaanka cusub ee alaabta kiimikada cagaaran. Battery Electrolytic dareeraha dareeraha dareeraha polyurethane, intermedia kiimikada iyo polycarbonate… ..etc
Haddii aad xiisaynayso DMC, pls waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto.
Khadka tooska ah: +86-15255616228 (WhatsApp & Wechat)
Alaab-qeybiye warshad Propylene Carbonate/PC CAS 108-32-7
Alaabta: Carbonate Propylene
Daahirsanaanta: 99.995%, 99.99%, 99.7%, 99.5%
PC waa dareeraha polarity wanaagsan, inta badan loo isticmaalo warshadaha elektarooniga ah, warshadaha macromolecular, warshadaha kiimikada,
dharka, daabacaadda iyo midabaynta iyo beeraha kale ee warshadaha.
Haddii aad xiisaynayso PC, pls waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto.
Sahayda Warshadda 4-Morpholineethanesulfonic acid (MES) CAS 4432-31-9 oo leh qiimo wanaagsan
Li-ion batteriga elektrolytka 99.9% CAS 105-58-8 Diethyl carbonate DEC
Alaabta: Diethyl carbonate / DEC
Daahirsanaanta: 99.9% min; 99% min
Carbonate Diethyl waa udub dhexaad dabiici ah oo dabiici ah. Badanaa waxaa loo adeegsadaa dareerayaasha nitrocellulose, ethers cellulose, resins synthetic iyo resins dabiici ah, oo dhexdhexaad u ah sunta cayayaanka pyrethrins iyo daawooyinka phenobarbital. Warshadaha qalabaynta, waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo rinjiga hagaajinta, kaas oo loo isticmaalo in lagu shaabadeeyo oo lagu hagaajiyo cathode of tube electron. Waxaa loo isticmaali karaa dareeraha elektrolytka batteriga Li-ion
Haddii aad xiisaynayso DEC, pls waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto.
Soo-saaraha ANTHRAQUINONE-2,7-DISULFONIC ACID DISODIUM SALT CAS 853-67-8 oo leh tayo sare
ANTHRAQUINONE-2,7-KHALIIFKA SALDHIGA AXDIGA AH
Daahirsanaanta: 99%~ 101%
Cusbada Anthraquinone-2,7-disulfonic acid milix disodium ayaa sidoo kale loo yaqaan 2,7-AQDS, 9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,7-anthracenedisulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 9,10-Anthraquinone-2, 7-disulfonate; Disodium Anthraquinone-2,7-disulfonate, Sodium Anthraquinone-2,7-disulfonate, iyo 9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt.
Dhexdhexaad Tropinone CAS 532-24-1
Tropinone waa alkaloid iyo horudhac u ah tiro ka mid ah alkaloids warshad dheeraad ah. Tropinone waa dhex-dhexaadiyaha ugu horreeya ee biosynthesis ee alkaloids tropane alkaloids-ka muhiimka u ah dawooyinka oo leh 8-azabicyclo [3.2.1] qaab dhismeedka baaskiilka ee octane ee qeexaya fasalkan alkaloid.
Poly-L-aspartic acid (PASP) tayo sare leh CAS 25608-40-6 qeybiyaha
Polyaspartic Acid (PASP)
Polyaspartic acid (PASA) waa amino acid polymerized ah oo nooleyaal ah oo biyo-milmi kara. Waxay leedahay astaamo badan oo kala duwan oo loo adeegsan karo tiro adeegsiyo ah. Waxaa jira dhowr farsamooyin isku -darka poly (aspartic acid) oo fududeeya horumarinta poly (aspartic acid) iyo walxaha la xiriira oo leh astaamo jireed iyo kiimiko oo kala duwan.
Semaglutide waxaa loo isticmaalaa cunto habboon iyo barnaamij jimicsi si loo xakameeyo sonkorta dhiigga ee sareysa dadka qaba sonkorowga nooca 2.
<< <Hore 123456 Xiga> >> Bogga 3/7